Mihazona Fit Holder
Andao hojerentsika ny fomba tokony hanaovana ny mankaleo
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-01-21
Ny haavon'ny mankaleo dia avo dia avo, ny refin'ny refin'ny refin-tsara dia mety hahatratra IT8 ~ IT7, ary ny vavahady dia azo fehezina ao anaty 0,01mm mazava tsara. tsara. Ho an'ny mankaleo ankapobeny, ny hamafin'ny faritra ...
Safidy fitaovana fitaovana CNC
Amin'izao fotoana izao, ny fitaovana ampiasain'ny fitaovana be mpampiasa CNC dia misy fitaovana diamondra, fitaovana nitrida boronika cubic, fitaovana vita amin'ny seramika, fitaovana mifono, fitaovana karbida ary fitaovana vy haingam-pandeha. Betsaka ny naotin'ny fitaovana fanapahana fitaovana ary miovaova be ny fananan'izy ireo. index index an'ny t ...
Fomba 8 hamonoana ny volanao farany
1. Mihazakazaka haingana loatra na miadana loatra Ny famaritana ny hafainganam-pandeha mety sy ny fahana ho an'ny fitaovanao sy ny fiasanao dia mety ho dingana sarotra, saingy ny fahazoana ny hafainganana mety indrindra (RPM) dia ilaina alohan'ny hanombohanao mihodina ny masininao. Ny fihazakazahana fitaovana haingana loatra dia mety hiteraka haben'ny puce suboptimal na koa loza ...
adiresy No.60, Xiangjiang Road (South), Chuangye Street, Suzhou National Hi-Tech District 215129
boaty mailaka nicogao@speedleopard.cn